In ka badan $ 100 Bilyan uu ganacsiga Faransiiska la leeyahay dalalka Islaamka - Diblomaasi
Ganacsiga dibadda ee in ka badan 100 bilyan oo doolar uu Faransiisku la leeyahay dalal u badan Muslimiin ayaa khatar ku jira iyada oo baaqyada macaamiisha qaadacaya badeecadaha dalkaas ay kordheen sababo la xiriira sheegashooyinka muranka dhaliyay ee madaxweyne Emmanuel Macron ee ku saabsan Islaamka ayaa dhaliyay khilaaf weyn oo ka taagan gobollo badan.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee ka codsada muwaadiniintiisa inay ka fogaadaan badeecadaha Faransiiska ee ku saabsan ajandaha Islaam-nacaybka ee Macron.
Horaantii bishan, Macron wuxuu diinta Islaamka ku tilmaamay diin “dhibaato ku jirta” wuxuuna ku dhawaaqay qorshayaal sharciyo adag oo lagula tacaalayo wax uu ugu yeeray “Gooni u goosad Islaamiga ah” oo ka jirta Faransiiska.
Dhacdooyinkani waxay ku soo beegantay dilkii macallin Faransiis ah oo muujiyey sawir gacmeedka nabi Muxamed NNKH fasalka dhexdiisa. Macron ayaa amaanay isaga oo sheegay in Faransiisku ka hor istaagi doonin daabicista kartoonada aflagaadada ah ee nabiga iyadoo lagu marmarsiyoonayo xorriyadda hadalka.
Hadalkiisa ayaa dhaliyay khilaaf aad u weyn iyo qaadacaadda alaabada Faransiiska, oo ay ku jiraan waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. Dalal badan oo Muslimiin ah, oo ay ku jiraan Qatar, Jordan, Kuwait, Morocco, Iran, Bangladesh, Turkey iyo Pakistan ayaa qaadacay badeecadaha Faransiiska laga keeno. Banaanbaxyo ayaa sidoo kale la sameeyay iyadoo lagu dhajiyay boorarka Macron.
Sida laga soo xigtay xog ay soo uruurisay wakaaladda Anadolu Agency (AA), inta badan waddamada muslimiintu waxay door muhiim ah ku leeyihiin ganacsiga shisheeye ee Faransiiska. Faransiiska ayaa la sheegay inay sameysay dhoofinta u dhiganta $ 45.8 bilyan oo dollar dalalka Islaamka sanadkii 2019, iyadoo soo dejinta ay gaareyso $ 58 bilyan.
Saameynta qaadacaadda way adag tahay in la xaqiijiyo, iyadoo kaliya wararka go’doonka ah ee iibinta alaabada Faransiiska ay saameyn ku yeelatay. Dalka Faransiiska waxaa ku nool dad ku dhow 67 milyan sanadkii 2019, waxay diiwaangeliyaan dhoofintooda inay u dhigantaa qiyaastii $ 555 bilyan, halka soo dejinta ay gaareyso qiyaastii $ 639 bilyan.
Faransiiska ayaa kamid ah dalalka ugu xoogga badan xagga dhoofinta ee wax soo saarka beeraha, iyadoo 3% ay u dhoofiyaan Bariga Dhexe, sida laga soo xigtay ololaha warshadaha ANIA.
Sidoo kale Faransiiska wuxuu kamid yahay dalalka hubka dhoofiya.
Shirkada Thales waxay iibisaa hub, tikniyoolajiyadda hawada iyo nidaamyada gaadiidka dadweynaha waxayna ka iibisaa dalal badan oo Muslimiin u badan. Macaamiisha waxaa ka mid ah Sacuudi Carabiya, Isutagga Imaaraatka Carabta (UAE), Turkiga iyo Qatar, sida lagu qoray bogga shirkadda.
Dalalka Masar iyo Qatar ayaa ka mid ah dowladaha ka dalbaday diyaaradda Rafale oo ay soo saarto shirkada Dassault, oo sidoo kale u aragta gobolka suuq weyn oo diyaaradaha gaarka loo leeyahay. Shirkada weyn ee tamarta ee Total ayaa ku sugan wadamo badan oo Muslimiin u badan.
Wadamada Pakistan, Bangaladesh iyo Turkiga, wadammada ay iska caabinta faransiiska ka muujiyeen sawir gacmeedyada aad loo hadal haayo, Total waxay inta badan diiradda saartaa iibinta wax soo saarka kiimikada iyo batroolka. Sacuudi Carabiya, iyo sidoo kale dhowr dal oo kale oo Khaliijka ah, Total waxay maalgashi ku leedahay sahaminta iyo soo saarista, mararka qaarkoodna dib u sifeyn.
Pieter D. Wezeman oo ah saynisyahan sare oo ka tirsan Sipri ayaa yiri “Kala bar dhoofinta hubka Mareykanka shantii sano ee la soo dhaafay waxay aadeen Bariga Dhexe, barkoodna waxay aadeen Sacuudi Carabiya.”
Dhinaca faashoonka, Faransiiska wuxuu Bariga dhexe ku leeyahay shirkadaha loogu jecel yahay sida LVMH-da ‘Louis Vuitton’ ama kuwa gaarka loo leeyahay ee ‘Chanel’ sidoo kale waxay leeyihiin dukaanno ku yaal Bariga Dhexe, oo ay ku jiraan Sacuudi Carabiya iyo Dubai.
Hal bartilmaameed oo ka mid ah baaqyada qaadacaadda, waxaa kamdi ah supermarket-ka Carrefour, waxayna ka hawlgashaa qaybo badan oo ka tirsan Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya. Olole loogu talagalay macaamiisha inay ka fogaadaan dukaamada tafaariiqleyda Faransiiska ayaa si isdaba joog ah uga socday baraha bulshada ee Sacuudiga.
Gawaarida Faransiiska Renault waxay suukh ku leedahay Turkiga oo ah suuqa siddeedaad ee ugu weyn, iyadoo 49,131 baabuur lagu iibiyay halkaas lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan.
PSA, oo sameysa sumadaha Citroen iyo Peugeot, ayaa ku sheegtay warbixinnadeedii ugu dambeeyay ee maaliyadeed, in iibka Turkiga uu sii kordhayay isla markaana uu matalayay meel ifaya oo ka jirta suuq adag, in kasta oo uusan tirooyin sheegin.
Qatar gudaheeda, dukaamada ayaa la sheegay in alaabtii Faransiiska laga soo saaray. Dalka Kuweyt, qaar ka mid ah dukaamada waawayn ayaa iyaguna soo iska soo saaray badeecooyinka Faransiiska.
Dalalka ay u badan yihiin Muslimiinta ayaa la sheegay inay inta badan ka keenaan mashiinno, marawaxadaha gaaska, badeecadaha duulimaadka, kuleyliyaha, qeybaha gawaarida, cagafyada, wax soo saarka birta, qalabka korontada ku shaqeeya ee elektaroniga ah iyo daawooyinka.
Dhinaca kale, Faransiiska ayaa inta badan soo dhoofsada badeecadaha sida saliidda cayriinka, gaaska dabiiciga ah, saliidaha macdanta, gawaarida, mootada iyo qaybaha gawaarida, kululeeyayaasha korontada, fiilooyinka, dharka, khudradda iyo miraha la qalajiyey.
Turkiga waa suuqa ugu weyn
Turkiga ayaa ah suuqa ugu sareeya ee wax dhoofinta Faransiiska ee wadamada muslimiinta u badan $ 6.6 bilyan oo doolar ayay ahayd sanadka 2019, sida xogta lagu sheegay.
Faransiiska ayaa ah isha 10aad ee ugu weyn ee u soo dhoofiyo badeecado Turkiga waana suuqa toddobaad ee ugu weyn ee dhoofinta Turkiga, sida laga soo xigtay Machadka Tirakoobka Turkiga (TurkStat).
Faransiiska ayaan qorsheyneynin qaadacitaan oo ka dhan ah wax soo saarka Turkiga waxayna sii wadi doontaa wadahadalka iyo xiriirka ay la leedahay Ankara iyo madaxweynaheeda, Wasiirka Ganacsiga Franck Riester ayaa sheegay Isniintii.
Related Topics:FalanqeynIn ka badan $ 100 Bilyan uu ganacsiga Faransiiska la leeyahay dalalka Islaamka ayaa halis ku jiraiyadoo lagu baaqayo qaadacidda alaabaha Faransiiska laga keenoVideo
Xiriirka ka dhexeeya Iswiidhan iyo Soomaaliya waa mid adag walow aysan muuqanin waxyaabo badan oo la taaban karo oo ay ka gaysteen dhinaca horumarinta siyaasadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Xiriirka labada dal wuxuu ka soo bilaabmay xornimadii 1960-kii.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabad ku qabsoontay Madaxtooyada Qaranka waxa uu kaga guddoomay warqadaha aqoonsiga danjirenimo safiirka cusub ee Dawladda Iswiidhan u soo magacawday Soomaaliya Mudane Per Lindgarde.
Danjiraha Boqortooyada Iswiidhan Mudane Per Lindgarde oo Madaxweynaha Jamhuuriyadda la wadaagay farriin iyo salaan uu uga siday Boqorka Sweden Mudane Carl XVI Gustaf ayaa soo bandhigay dadaalka uu ku bixin doono adkaynta xiriirka saaxiibtinnimo ee labada dal, isaga oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyey soo dhoweynta diirran.
Madaxweyne Farmaajo iyo Danjire Lindgarde ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Iswiidhan, kaas oo ku dhisan wax wada-qabsi, is-ixtiraam si loo adkeeyo iskaashiga dhinacyada amniga, gargaarka bini’aadannimada, dhaqaalaha, maalgashiga, horumarinta iyo arrimaha bulshada.
Ugu dambayn, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Danjiraha Cusub ee Iswiidhan ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay, waxa uuna u sheegay in uu soo dhoweyn wanaagsan kala kulmi doono shacabka Soomaaliyeed, Dowladda Federaalkuna ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadka diblumaasiyadeed ee loo soo igmaday.
Qorshaha dowladda Iswiidhan ee Soomaaliya
Sida ka muuqato mareegta Dowladda Iswiidhan ayaa waxay dejisay istiraajiyad ay ugu magac dartay “Istaraatiijiyadda horumarinta Iswiidhan ee iskaashiga Soomaaliya 2018–2022” (Strategy for Sweden’s development
cooperation with Somalia 2018–2022)
Marka la eego qaab-dhismeedka istiraatiijiyadan, iskaashiga horumarineed ee Iswiidhan iyo Soomaaliya ayaa tilmaamayo in dowladda Iswiidhan ay gacan ka geysan doonta ‘nabad waarta, xoojinta u-adkaysiga dhibaatooyinka iyo masiibooyinka, ixtiraamka xuquuqda aadanaha, sinnaanta jinsiga iyo horumar waara.
Iswiidhan waxay hoy u tahay tobbanaan kun oo Soomaali ah oo qaxooti ahaan iskeega dhiibay waddankaas. Soomaalida dalkaas kunool ayaa dalka dib ugu soo celinayo kaalmo muhiim ah sida qoysaskooda iyo asxaabtooda jooga Soomaaliya. Iswiidhan oo hormuud u ah xuquuqda aadanaha adduunka, waxay muujisay sida ay uga go’an tahay kala duwanaanshaha iyo ixtiraamka dhammaan dhaqamada iyo diimaha, oo ay ku jiraan Islaamka iyo Muslimiinta.
Xiriirka ka dhexeeya Iswiidhan iyo Soomaaliya waa mid adag walow aysan muuqanin waxyaabo badan oo la taaban karo oo ay ka gaysteen dhinaca horumarinta siyaasadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Xiriirka labada dal wuxuu ka soo bilaabmay xornimadii 1960-kii. Xiriirkaas waxaa xoojinayay ujeedka ay wadaagaan labada dhinac ee ah horumarinta nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya, iyo dhiirrigelinta dulqaadka iyo ixtiraamka dadka.
Xiriirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya
Marka laga reebo qunsuliyadaha sharafta leh, xiriirka dibedda ee Soomaaliya waxaa ugu horreeya Madaxweynaha sida madaxa dawladda, Ra’iisul Wasaaraha oo ah madaxa dawladda, iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dowladda Federaalka. Sida ku cad qodobka 54aad ee dastuurka qaranka, awood qaybsiga awoodaha iyo kheyraadka u dhexeeya Dawladda Federaalka iyo Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa inay ka wada xaajoodaan oo ku heshiiyaan Dawladda Federaalka iyo Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka, marka laga reebo arrimaha khuseeya ee arrimaha dibadda, difaaca qaranka, dhalashada iyo socdaalka, iyo siyaasadda lacagta.
Qodobka 53aad wuxuu kaloo qeexayaa in Dawladda Federaalku kala tashato Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka arrimaha waaweyn ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah, oo ay ku jiraan wada xaajoodyada ku saabsan ganacsiga dibadda, maaliyadda iyo heshiisyada.
Iswiidhan ma waxay isha ku haysaa Madaxbanaanida Somaliland?
Dalka Iswiidhan, oo ka mid ah waddammadii ugu horreeyey ee Midowga Yurub ee aqoonsaday Falastiin iyo mid iyaduna ku baratamaysay aqoonsiga Saxaraha Galbeed, waxay hadda u muuqdaan inay u ololaynaya aqoonsiga Somaliland si loogu jaro Soomaaliya inteeda kale.
In kasta oo ay weli beesha caalamku aqoonsanayn, haddana Somaliland waxay dhawaan qabatay doorashadii saddexaad ee madaxweynenimada, taas oo noqotay codkeedii lixaad tan iyo markii ay ku dhawaaqday madax-bannaanideeda Soomaaliya 29 sano sano ka hor. Michael Walls, oo ah guddoomiyaha kooxda dabagalka caalamiga ah, ayaa ku dooday in doorashada Somaliland loo arki karo inay tahay qirasho muuqata.
“In kasta oo aan Somaliland aqoonsi ka haysan dunida, xaqiiqda ah inay suurtogal ahayd in la hirgeliyo tan [doorashada] ayaa si uun u noqonaysa qirasho u gaar ah,” ayuu yiri Michael Walls, sida laga soo xigtay Nyheter Idag.
Weydiimo email ah oo ku saabsan aqoonsiga Somaliland oo ay dirtay warbaahintu, laba xisbi oo Swedish ah ayaa si togan uga jawaabay. Xisbiga Kristdemokraterna (KD) wuxuu caddeeyay in kasta oo ay xaaladda nugul ay ka jirto waddanka ay colaaddu saameysay, haddana waxay u socotaa jihada ka soo horjeeda, oo ku wajahan nabadda iyo xasilloonida, inkasta oo xiriirka ay la leedahay Soomaaliya uu weli yahay mid xasaasi ah.
“KD waxay aaminsan tahay in aqoonsiga Somaliland la sameeyo iyadoo lala kaashanayo waddamada xubnaha ka ah Midowga Yurub, marka khilaafku xal u soo dhowaado,” ayuu KD ku jawaabay.
Hase yeeshee, xisbiga Sverigedemokraterna wuxuu ka dhawaajiyay hab ka sii xagjirsan, oo ay ku taageereen madaxbannaanida Somaliland.
“Somaliland waxay buuxisay dhammaan shuruudihii ay dawladdu lahayd si ay u aqoonsato dal madax-bannaan. Waxay haystaan dhulkooda waxayna tusaale weyn u yihiin qaybtooda adduunka, oo ay ka dhaceen doorashooyin dimuqraadi ah, hay’ado si fiican u shaqaynaya iyo nabad iyo xasillooni qaraabo ah. , ”Ayuu yiri Markus Wiechel, isaga oo ku dooday in xaaladda Somaliland ay wax badan kaga duwan tahay inta kale ee weli loo yaqaan Soomaaliya.
Wiechel ayaa sidoo kale ku dooday in aqoonsiga Somaliland uu tusaale wanaagsan u noqon doono “waxa la gaari karo iyada oo lagu xallinayo khilaafaadka wadahadal halkii laga samayn lahaa rabshado.”
Horraantii sannadka 2017, Ergeyga Gaarka ah ee Somaliland ee Midowga Yurub Mikael Torstensson ayaa ku tilmaamay “dalka ugu dimuqraadiyadda badan Geeska Afrika,” in kasta oo ay ku hareeraysan yihiin kaligii-taliyayaal, argagixiso iyo budhcad-badeed.
“Mid ka mid ah meelaha ugu nugul adduunka-oo ay ku sifoobeen keli-talisnimo, dagaal iyo argaggixisanimo-Jamhuuriyadda Somaliland ee Geeska Afrika waa mid ka reebban. Dalku wuxuu u horumaray dimuqraadiyadda keliya ee gobolka ka shaqaysa, iyada oo si qoto dheer loogu shaqaynayo Xuquuqul insaanka iyo sinnaanta jinsiga. Dalku wuxuu buuxiyey dhammaan shuruudihii aqoonsiga buuxa, maadaama uu yahay dal madax-bannaan, ”Torstensson ayaa ku qoray maqaal aragti ah oo dabada ka riixaya aqoonsiga Somaliland oo uu daabacay Värden Idag.
Dhammaan aragtiyashaasi ma tilmamayso aragtida dowladda Iswiidhan ee wakhti xaaddirkaan ka taliso Iswiidhan. Dal marka uu burburo cida kali ee badbaadin karta waa dadkiisa. Si kastaba ha ahaatee, Muslim, Gaalo, Madow iyo Caddaan samatabixinta Soomaaliya waa loo soo gurmaday, waxaa dalka dibediisa lagu qabtay ugu yaraan 15 shir oo loo agaasimay dib-u-heshiisinta ururada Soomaaliya ka amar-ku-taagleeya. Shirkii ugu horeeyey oo lagu qabtay Jabuuti, 21.07.1991kii ayaa Mudane Cali Mahdi Maxamed loo doortay madaxweyne ku meel gaar ah muddo laba sano ah, waxaa lagu soo afjaray oo lagu qatimay shirkii 15aad oo lagu qabtay Mbaghti-Keenya, 10.10.2004 oo Kornayl Cabdullaahi Yuusuf Axmed loo doortay madaxweyne muddo shan sano ah.
15kii shir ee daafaha dunida lagu qabtay waxay noqdeen madhalays aan wax natiijo ah laga macaashin, shir kasta waxaa lagu ebyaa oo lagu soo bandhigaa waxaa hoggaamiye kooxeedyadu ku magacaabaan Axdiga ku-meel-gaarka ah oo ah dastuur qodobadiisa aad loo qurxiyey, balse aan weligi la dhaqangelin. Dhibka ugu weyn ee Soomaaliya haysta waa Madaxweyne qaran waxaa beddelay Madaxweyneyaal qabiil (4.5) ummadda waxay u baahan tahay madax ayaga matala kana shaqeeyo midnimadooda.
Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka ahna Wasiirka Arrimaha dibadda Itoobiya Demeke Mekonnen iyo Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed C/risaaq ayaa ku kulmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. War qoraal ah oo ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Soomaaliya ayaa lagu sheegay wada kulanka labada dhinac waxa uu ku saabsanaa.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud Abuubakar, ayaa shalay gelinkii dambe oo Khamiis ahayd kula kulmay Magaalada Addis Ababa, Ra’iisul wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya, Mudane Demeke Mekonnen, waxa uu kala hadlay xoojinta xiriirka labo geesoodka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo sidii sare loogu qaadi lahaa heerka iskuduwid oo dhinac kastaba leh iyo hore u dhaqaajintiisa si salballaaran iyadoo la taabagelinayo isfahannada iyo habmaamuusyadii hore loogu heshiiyey.
Wasaaradda ayaanan qorin ama aanan ka hadlin wax intaas dhaafsiisanaa oo ku saabsan kulanka labada wasiir. – Labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo khuseeya xiriirka labo geesoodka iyo arrimaha gobolka, Mr Demeke ayaa sheegaya isagoo qadarinaya cilaaqaadka soo jireenka ah ee labada dal ee deriska ah waxaa uu balan qaaday in Itoobiya ay ku dadaali doonto intii karaankeeda ah sidii xiriirkaasi loo gaarsiin lahaa heer sare.
Sidoo kale waxaa uu dib xusuusiyay halka ay ka taagan tahay dowladiisa ee fahamka howlgalka sharci fulinta ee Gobolkq Tigray inuu yahay arrin gudaha Itoobiya, wuxuuna cadeeyey in Soomaaliya ay ka go’antahay dadaallada wadajirka ah ee labada dal ee dhismaha iyo ilaalinta nabada gobolka.
Waxay dad badan wakhtiyadaan dambe isweydiinayaan siyaasada Itoobiya ee ku wajahan Soomaaliya waji cusub miyay yeelatay mise anaga ayaa moodnay?
Xiriirka ka dhexeeya dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya weligiisba ma aheyn mid caafimaad qaba. Marka la eego taariikhda dhow ee Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaa dhex marey hal dagaal oo yar iyo mid weyn.
Dhanka kale, burburka iyo kala tagga Soomaalia laftigiisu wuxuu keeney khatar kale oo sii kordheysa marba marka ka danbeysa. Dhibaatada ka taagan Soomaaliya waxay oggolaatey in diin ku adeygga Soomaalidu uu xiddiddeysto. Soomaaliya waxay gabbaad iyo marin u noqotey argagixisada iyo kooxaha diintooda ku ad adag. Curiyayaal nabad diid ah ayaa Soomaaliya u isticmaalaya in ay saldhig iyo marin u noqoto si ay u hujuumaan nabadda guud ahaan gobolka geeska Afrika. Sidaas darteed burburkii Soomaaliya khatar ayuu u keeney Itoobiya.
Israa’iil iyo Imaraatka labaduba waxay u arkaan Iiraan inay tahay cadawgooda gobolka, laakiin go’aanka ay ku cadeysteen xiriirka ayaa sidoo kale ka caawinaya inay sameystaan hal midnimo oo ka dhan ah saameynta sii kordheysa ee Turkiga ku yeelanayo gobolka.
Heshiiskii Israa’iil iyo Imaaraatka ayaa ah in Israa’iiliyiinta ay ku guuleysteen inay ka gudbaan caqabad haysatay oo astaan u ah iyagoo xiriir la samaystay waddamo kale oo Carab ah oo Israa’iil aysan wax xuduud la wadaagin.
Imaaraatka, heshiisku wuxuu muujiyey inay ku guuleysan karto waxa waddamada badankood aysan qaban karin: joojinta qorshayaasha ku darsashada dhulka Falastiin ee Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu iyo, sida sheekooyinka soo socda ay muujiyeen, helitaanka qalabka casriga ah ee ugu casrisan Mareykanka, oo ay ku jiraan F-35 oo ah diyaarad dagaal. Abu Dhabi waxay sidoo kale xoojisay xiriirka ay la leedahay Mareykanka iyadoon loo eegin cidda ku guuleysata doorashada madaxtinimo ee Mareykanka.
Dhinaca kale, ra’isal wasaaraha Israa’iil Bejamin Netanyahu wuxuu sheegay dhulka Israa’iil inuu 30% uu u ballaarinayo dhinaca daanta galbeed oo ay Falastiiniyiintu ku hamminayaan inuu ka mid noqdo dal madax bannaan oo ay Falastiiniyiintu leeyihiin sida uu dhigayo waxa looga yeeray heshiiska Trump.
Iraa’iil iyo waddamada carabta ee ku yalla Bariga Dhexe iyo Waqoyiga Afrika waxaa ka dhaxeeyey colaad taariikhi ah wixii ka dambeeyey marki ay Israa’iil aasaasantay 1948-kii, waxaana muddo kaddib Israa’iil heshiis la galay Masar 1979-kii iyo Urdun oo 1994-kii, iyada oo labada dhinacba ay dalka Iiraan u arkaan mid khatar ku ah gobolka. Dooddaha halkaan kaaga muuqdo waxay soo jeedinaysaa inay jiri karaan wax ka badan heshiiska inta isha lagu hayo.
Israa’iil iyo Imaaraadkuba waxaa la ogaa in ay ka xumaadeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama saxiixa heshiiskii nukliyeerka uu la galay Iiraan. Heshiiska 2015, waxay Iiraan ku aqbashay in ay xaddido hawlaheeda nukliyeerka isla markaana u ogalaato kormeerayaal caalami ah in ay la socdaan hawlahaa, waxa iyadana loo ogolaaday in laga qaado cunoqabatayntii dhaqaale ee curyaamisay.
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa se heshiiskaa ka baxay 2018, waxaanu sheegay in uu doonayo in uu Iiraan ku dirqiyo in ay heshiis cusub oo hawlaheedaa nukliyeerka si buuxda u joojinaya ay saxiixdo oo ay sidoo kalena ku joojiso horumarinta sawaariikhdeeda.
“Iiraan waxay sii wadi doontaa tayeynta nukliyeerkeeda iyada oo aan wax xayiraad ah isa saarayn sababtuna waa in ay soo baheen baahiyo farsamo” ayaa warkaasi sheegay.
Hase yeeshee, warkaa laguma sheegin in Iiraan ka baxday heshiiskaa, waxaanu intaa ku daray warku in Iran ay sideedii caadiga ahayd ula shaqayn doonto hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan nukliyeerka ee IAEA.
Warka wuxuu intaa ku daray in Iiraan diyaar u tahay in ay fuliso waajibaadka heshiiskaasi saaray marka ay aragto in la fuliyey ballanqaadkii heshiiskaasi lagu siiyey. War fidiyeenku waxay sheegayaan in hadalkaa macnihiisu yahay in iibkii saliidda Iran ay caqabad ku noqotay cunaqabataynta Maraykanku saaray. Iiraan waxay sidoo kale had iyo goor ku nuuxnuxsataa in barnaamijkeeda nukliyeerku gebigiisuba yahay mid nabadoon.
Heshiiska Imaraatka iyo Israa’iil, waxaa intaa usii dheer, Iiraan waxay u taagan tahay khatar iyaga kusoo fool leh. Si kale haddii loo dhigo, Qorshaha Wadajirka ah ee Waxqabadka (JCPOA) waxaa suuragal ah inuu si ula kac ah isu keenay labadan dal, taasoo abuureysa fursado ay ku wadaagaan ma ahan oo keliya ciilkooda, laakiin sidoo kale sirdoonka iyo macluumaadka kale ee la xiriira millatariga.
Iiraan waxay leedahay istaraatiijiyad madax-xanuun badan leh. Waxaana heshiiska si adag u dhaleeceeyay hoggaamiyeyaasha Iiraan. Wuxuuna heshiiskan horseedayaa in Iiraan ay muujiso dadaallo dheeraad ah. Cunaqabateynta uu Trump saaray Iiraan ayaa hadda dhibaato dhaqaale ku heysa dalkaas, waxayna heystaan istaraatiijiyad sababeysa madax xanuun daran.
Saldhigyada Israa’iil waxay ka fog yihiin Iiraan marka la barbardhigo Imaaraatka oo uu u dhexeeyo biyaha gacanka khaliijka, waana arrin dharbaaxo ku noqon karta Iiraan, waa haddii ay ka hadlaan duqeynta xarumaha nukliyerka ee dalkaas.
Israa’iil, Mareykanka, Baxreyn iyo Imaaraatka waxaa la gudboon tallaabooyin cusub. Iiraan dhankeedana waxay isu arkaan in la yareeyay dhaqdhaqaaqooda ku aadan arrimaha gobolka.
Mareykanka, laga bilaabo muddadii Obama, ma uusan qarinin inuu doonayo inuu yareeyo ballanqaadyadiisa milatari ee adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan dabcan Bariga Dhexe. Dhambaalkan waxaa si aad ah loo xoojiyay intii lagu jiray maamulkii Donald J. Trump. Si toos ah ama miyir la’aan ah, hadalada xooga saaraya in la joojiyo “dagaalada aan dhamaadka lahayn,” iyo sidoo kale diidmada Washington ee ciqaabta reer Iiraan weeraradii Sebtember 2019 ee Sacuudi Carabiya, ayaa meesha ka saartay iimaankoodii ku waajahanaa mustaqbalka fog ee Washington. Dabcan Iiraan ma aheyn wax la yaab leh mid kamid ah kuwii ugu xumaa uguna xumaa ee dhaleeceeya heshiiska Israa’iil iyo Imaaraatka, iyagoo ku doodaya in Abu Dhabi uu khiyaanay qadiyada Falastiin
Waxaa jira jilaa kale oo suurtagal ah oo laga yaabo inuu ka caawiyey labadan inay iskaashi yeeshaan: Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ma uusan qarin waxa uu damacsan yahay inuu ka qabto hoggaanka gobolka — qaar baa leh dunida Islaamka.
Hadalkiisa iyo ficilkiisa, wuxuu si isa soo taraysa u muujiyay ujeedooyinka dib u eegista Turkiga. Erdogan wuxuu si aad ah u dhaleeceeyay in Imaaraadku uu xiriir diblomaasiyadeed la sameeyo Israa’iil, wuxuuna sheegay inuu ka fiirsan doono dib u eegista xiriirka Ankara iyo Abu Dhabi. Tani waxay ahayd wax lala yaabo markay ahayd in Turkigu uu xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah la lahaa Israa’iil tan iyo 1949.
Imaaraatka iyo Turkiga waxay markii ugu horraysay isku khilaafeen taageerada Erdogan ee Ikhwaanul Muslimiinka, kuma koobna oo keliya Masar laakiin sidoo kale Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa go’doomin ku soo rogay dalka Qadar si loo ciqaabo qoyska boqortooyada Qadar ee taageersan Ikhwaanka. Dhanka kale, Turkidu waxay u soo baxeen inay yihiin taageeraha kaliya ee ugu muhiimsan Doha iyagoo siiya gargaar siyaasadeed iyo mid militari oo aad loogu baahnaa.
Turkiga iyo khilaafka Imaaraadku sidoo kale wuxuu ku fiday ilaa Liibiya, halkaas oo labada dalba ay si firfircoon iyo millatari u dhabar adeegaan kooxihii kala duwanaa ee dagaalka sokeeye ee dalkaas. Abu Dhabi waxay u aragtaa firfircoonida Turkiga iyo rabitaankeeda ah inay sidoo kale ka dhisto saldhigyo milatari Libya, Soomaaliya, iyo Suudaan inay cadeyn u tahay in Ankara aysan kaliya dhexgalin khilaafaadka Carabta, laakiin sidoo kale inay iyadu hareeraysan tahay.
Dareen-diidku waa wada-jir. Markii la weydiiyay su’aalo ku saabsan Imaaraadka, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu wuxuu si fudud u yiri,
“Haddii aad weydiineyso yaa xasiloonida ka dhigaya gobolkan, yaa keenaya qalalaase, markaa waxaan dhahnaa Abu Dhabi bilaa shaki la’aan.”
Israa’iil sidoo kale waxay isku dhaceen Turkiga. In kasta oo xiriir ganacsi oo adagi jiray, haddana Turkiga iyo Israa’iil waxay ku dhex milmeen khilaafaad isdaba-joog ah oo ka bilaabmay taageerada furan ee Ankara u fidisay Xamaas iyo xiisadaha ka taagan Bariga Dhexe, halkaas oo ay Turkigu si xoog leh ugu babac dhigayaan danaha dhaqaale iyo madax-bannaanida Giriigga iyo Qubrus. Turkiga ayaa dhaleeceeyay oo xittaa faragaliyay iskaashiga Masar, Qubrus, Griiga, iyo israa’iil ee loogu talagalay in gaaska loo dhoofiyo Yurub laga soo dhoofiyo dhulkooda. Imaaraadku sidoo kale qayb ayuu ka yahay dadaalkan.
Haddii Israa’iiliyiintu ay ka digtoonaayeen ujeeddooyinka Ankara ee waagii hore, fiidiyow dhowaan afar daqiiqo socday oo ka socda wasaaradda warfaafinta Turkiga ma caawin karin. Waxay ammaaneysaa qabsashadii militariga Turkiga, oo ka bilaabatay Cusmaaniyiinta kuna dhammaanaysa ballanqaadka xoreynta diinta Islaamka mowqifka saddexaad ee ugu muhiimsan, masjidka al-Aqsa, oo ka dhaca Qudus.
Firfircoonida Turkiga sidoo kale waxaa lagu arki karaa macnaha Washington maqane. Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay horumarkan isagoo qiil ka dhiganaya go’aankiisa ah “in la joojiyo siyaasadaha dib u eegista ee Turkiga.” In kasta oo iska caabinta Turkiga aysan cadayn sababta koowaad ee ka dambeysa isu soo dhawaanshaha Israa’iil iyo Imaaraadka, haddana waxaa laga yaabaa inaysan ka fogeyn xisaabintooda.